Abbootiin seeraa Maalaawii ‘bu’aa filannoo burjaaja’e’ haqan badhaafaman. – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooAbbootiin seeraa Maalaawii ‘bu’aa filannoo burjaaja’e’ haqan badhaafaman.
Abbootiin seeraa Maalaawii ‘bu’aa filannoo burjaaja’e’ haqan badhaafaman
BBC Afaan Oromo | Onkololeessa 28, 2020
Laazaaras Chaakweeraan filannoo lammataan irra-aanan
Abbootiin seeraa Mana Murtii Heeraa Maalaawii badhaafamtoota badhaasa Dhaabbatni biyya UK Chaatam Haawus (Chatham House) qopheessu kan bara 2020 injifatan.
Dhaabbatichi injifattoota badhaasa isaa bara kana Wiixata darbe yeroo beeksisu ”Afrikaa keessatti qofa osoo hin taane addunyaarrattuu biyyootni dimookiraasiin beekaman rakkoo keessa wayita jiranitti abbootiin seeraa Maalaawii olaantummaa seeraa fi dimookraasummaa michoota isaanii addunyaatti mul’isaniiruu” jedhe.
Gochi abbootii seeraa shanan Mana Murtii Heeraa Maalaawii badhaasaa kana akka injifatan sababa ta’e filannoo pireezidantummaa Maalaawii bara 2019’tti gaggeefamee Pireezidantiin aangoorra turan Piitar Mutaarikaan injifatanii turan kufaa taasisuu isaaniiti.
Sababni bu’aan filannoo kun fudhatama akka dhabu ta’ee filannoon kan biraan gaggeefameef ammoo filannichi burjaajii hedduu keessummeessuu isaati.
Dhimmi burjaajii filannoo kanaa erga Mana Murtii Heeraa qaqqabee booda abbootiin seeraa shanan ‘doorsisa qaama biyya bulchaa jruufi matta’aaf’ osoo harka hin laatiin fakkeenyummaa guddaa agarsiisaniiru.
Abbootiin seeraa kun bu’uura heeraa fuula 50 qopheessuun sibiila rasaasan hin uramne uffatanii bu’aan filannoo kun fudhatama kan hin qabne ta’uu ibsan.
Dhaabbatichi abbootiin seeraa dhiira afuriifi dubartiin tokko ”amantaa heera biyyattiif qaban akkaasumas mirga dimookiraatawaa lammiileef haala rakkisaa keessattti dhaabachuun akka danda’amu agarsiisaniiru” jedhe.
Dhiibbaan dhaaba aangoo mootummaa harkaa qabu jabaan bakka jirutti murtee heera biyyaan eegamu walabummaa isaanii haala mirkaneessun bahataniirus jechuun jaje.
Biyyootni Afrikaa gariin dimookrasii mirkaneessuuf adeemsa gaariirra kan jiran ta’uus ”weerarri Koroonaavaayiras abbaa irrootaaf carraa uumeeraa” jedha dhaabbatichi.
”Murteen Mana Murtii heeraa Maalaawii ofitti amanamummaa lammiilee biyyattii ijaaruu qofa osoo hin taane fayidaan inni qajeeltoowwan dimookraasii biyyoota Afrikaa hundaaf ibsuuf qabu olaanadha” jedhan Daayireekatarri Chaatam Haawus Dr. Robin Nibleet.
Erga bara 2005 kennamuu kan eegale badhaasni kun kana dura dhaabbilee akka CPJ fi Médecins Sans Frontières akkasumas namoota dhuunfaa akka pireezidantii Gaanaa duraanii Joon Kufoor fa’iif beekamtii kenneera.
Olaantummaa Seeraa Cabsaa, Olaantummaa seeraa kabachiisuun hin Danda’amu! (Ibsa KDHSLO-Caamsaa 6,2021) Lammiileen Oromiyaa Biyya isaanii…
Odeeffannoo: PPn dhiyootti filannoo geggeessuu barbaaddi
Odeeffannoo: PPn dhiyootti filannoo geggeessuu barbaaddi Waltajjiin hatattamaa Fulbaana 3-9/2013 (ALH) ni geggeeffama. Dhimma filannoo…
Odeessa qabatamaa: Bilxiginnaan yeroo filannoo dheeressuuf wal mari'ataa jirti " Nageenya biyyaa fi naannoo keenyaas…